Muuqaal fiidiyow ah ayaa muujinaya qalin qalin Apple lagu sheegay 3 "oo aad u dhalaalaya" | Waxaan ka socdaa mac
Muuqaal fiidiyow ah ayaa muujinaya "aad u dhalaalaya" qalin qalinka Apple 3
Soo bandhigida suurtagalka ah ee cusub Apple qalin 3 Shaki la'aan, oo ay weheliso casuumaadda munaasabadda Talaadada soo socota, labada war ee ugu caansan toddobaadkan. Midka qalin qalin leh ayaa ka mid ahaa sirta ugu wanaagsan ee la hayo. Ilaa dhowr maalmood ka hor, jiilkan cusub ee suurtogalka ah ee qalinka Apple lama aqoon.
Maantana waxaan ogaanay dabeecad suurtagal ah oo jiilkan saddexaad ah. Ugu yaraan, dusha. Kaas oo ka bilaabmaya inuu noqdo caddow madoow oo qalinka Apple-ka ee hadda u socda inuu noqdo dhalaal dhalaalaya, sida asalka ah. Waa waxa kaliya ee lagu arki karo fiidiyow ka muuqday shabakadaha bulshada, halkaas oo suurtogal ah in lagu muujiyo qalinkan Apple Pen 3.
Kahor dhacdadii AppleGuga la rakibey»Kaas oo dhici doona Talaadada soo socota, warar xan ah ayaa soo baxay oo muujinaya in nooc cusub oo qalinka Apple-ka ah lagu soo bandhigi karo muxaadarada la sheegay. Dhawr saacadood uun ka dib markii ay soo baxday xantaas, fiidiyoow ayaa durba ka gudbay Twitter-ka oo ay ku qoran tahay "Apple Pencil 3" ayaa u muuqda.
Fiidiyowga waxaa soo dhigay isticmaale aan la aqoon Twitter kaas oo sheeganaya in lagu duubay silsiladda qalabka. Fiidiyowga gaaban waxa kaliya ee aan ku qiimeyn karno ayaa ah in qalinka Apple 3 uu umuuqdo inuu aad ugu egyahay qaabka jiilka labaad, laakiin isbeddel muhiim ah: ku noqoshada dhammaystirka dhalaalaya ee ka imanaya qaybtiisa koowaad.
Dibedda, kaliya isbeddelka ayaa isbeddelaya, laga bilaabo maqaar ilaa dhalaal
Jiilka koowaad ee qalinka Apple wuxuu ka kooban yahay naqshad qurux badan iyo qarashka ku baxa isku xidhka danabka. Apple wali waxay ku iibinaysaa jiilka koowaad qalinka Apple ee iphone mini iyo iPad-ka heerka 9,7-inch.
Si kastaba ha noqotee, oo ay weheliso iPad 2018 ProApple wuxuu soo saaray jiilka labaad ee Apple Pencil oo leh naqshad jilicsan iyo awood u leh inuu si macquul ah ugu xirmo dhinaca iPad Pro si loo isku daro loona buuxiyo. Tani sidoo kale waxay la jaan qaadi kartaa iPad Air oo la soo saaray sanadkii hore.
Qalinka Apple Apple 3 wuxuu umuuqdaa inuu isku darayo labadan naqshadood. Waxay u muuqataa inay leedahay gees gees ah si loogu oggolaado inay si magnetically ah ugu xirmaan iPad Air iyo iPad Pro si loogu soo dalaco, laakiin leh muuqaal dhalaalaya.
Hubaal moodalkan cusubi wuu dhuumanayaa shaqooyin cusub gudaha, iyo isbeddelka qaabdhismeedka ayaa ah kaliya kala duwanaanshaha dibadda ee la xiriira nooca hadda jira. Waa inaan sugnaa ilaa Talaadada si aan u ogaano. Ama maya…
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Muuqaal fiidiyow ah ayaa muujinaya "aad u dhalaalaya" qalin qalinka Apple 3
Apple ayaa gorgortan kula jirta sidii ay u iibsan lahayd xuquuqda filimkii ugu dambeeyay ee Robert Zemeckis
Microsoft Desktop Remote wuxuu hadda asal ahaan la jaan qaadayaa Apple Silicon